ILoft yobuhlanga ebanzi eBarrio Bellavista - I-Airbnb
ILoft yobuhlanga ebanzi eBarrio Bellavista
I-loft yonke sinombuki zindwendwe onguOsvaldo
Ziyolise ngokuhombisa okuzisa kunye okona kulungileyo emantla, kumbindi nakumazantsi eChile. Imisebenzi yezandla yi-protagonists, kunye nezinto ezifana neekeramics, amalaphu kunye ne-wicker. Ifenitshala yayo yenziwe ngamaplanga omthonyama, iziqu kunye namatye omthonyama.
Ibhedi elala abantu ababini, Igumbi lokuhlambela elisegumbini lokulala
4.83 (iingxelo zokuhlola 218)
Indawo yaseBellavista ijikelezwe ziipaki ezintathu ezinkulu kwaye ikufutshane neziko lembali lesixeko. Inobomi obunzulu kunye nobonwabisayo be-bohemian, kunye neendawo zokutyela, iibha, iithiyetha, iiklabhu zomdaniso, iindawo zolwazi lwabakhenkethi kunye nerenti yebhayisekile.
Umgama ukusuka eCuracaví Airport
Umbuki zindwendwe ngu- Osvaldo
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Recoleta